बिज्ञान प्रबिधि Archives - E mechi
काठमाडौँ। एनसेलको सिम बहिस्कार कार्यक्रम भइरहेको बेला नेपाल टेलिकमले एसईइ दिएका र अन्य विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न अफर उपलब्ध गराइरहेको छ । कम्पनीले एसईई परीक्षा दिएका र उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि उपलब्ध गराएको यो आकर्षक ‘विद्यार्थी अफर’ विद्यार्थीमाझ लोकप्रिय भएकाले हाल पनि निरन्तरता दिइएको कम्पनीले ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई ५० रुपैयाँ टक भ्यालु भएको सिम निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । सो रकम मध्ये १० रुपैयाँबाट कल गर्न, डाटा खरिद गर्न वा एसएमएस गर्न सकिने सुविधा छ । बाँकी ४० रुपैयाँबाट ४० मिनेट कल गर्न, ६० एमबी डाटा खरिद गर्न र २० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यी सबै सुविधा ३० दिनभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै ‘विद्यार्थी अफर’ अन्तर्गतको सिम लिएका विद्यार्थीलाई ६ महिनासम्म बोनसको रुपमा प्रतिमहिना ४० मिनेट
एनसेल वा नेपाल टेलिकममा फोन नलाग्दा , फोन व्यस्त हुँदा तपाइले सुन्ने आवाज कस्काे हो, चिन्नुहोस्
काठमाडौँ । फोन व्यस्त हुँदा, अरू कुनै कारणले सम्पर्क हुन नसक्दा वा अन्य जानकारी अथवा सेवा लिन खोज्दा फोनमा महिलाको स्वर बजेको त तपाईँ हामीले सुनेकै छौँ।उनीहरूले दिने रेकर्ड गरिएका सन्देश सुनेर केही प्रयोगकर्ताहरू झर्को पनि मान्छन्। तर केहीलाई भने ती महिला को हुन् भनेर जिज्ञासा पनि उत्पन्न हुन्छ।”तपाईँले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ। केही समयपछि पुन: डायल गर्नुहोला।” नेपाल टेलिकममा सुनिने यो स्वर अनुपमा कर्माचार्यको हो।नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि सन्देश रेकर्ड गराउन कलाकारको खोजी गरेको थाहा पाएपछि उनले आफ्नो स्वर रेकर्ड गरेर पठाइन्। अरू केही कलाकारसँगै उनको स्वर पनि छानियो।उनै कर्माचार्यको स्वर अहिलेसम्म पनि बजिराखेको छ। त्यस्तै टेलिकममा बज्ने स्वरमध्ये भूमिका थापाको स्वर पनि हो। उनले रेकर्ड गराएको सन्देश अङ्ग्रेजी भाषामा बज्छ।पछि सुरु भएको अर्को निजी दूरसञ्चार कम्पनी
जुकरबर्गको सुरक्षाका लागि फेसबुकले गर्‍यो अढाई अर्ब खर्च
काठमाडौं । गत वर्ष सन् २०१८ भरि नै फेसबुकका सिइओ मार्क जुकरबर्ग चर्चाको केन्द्रमा रहे, कारण उनी नेतृत्वको विश्वको सबैभन्दा ठूलो सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुक विवादमा मुछियो । सिलिकन भ्यालीका उच्च पदस्थहरु आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम खर्चिन्छन् । गार्जियनको रिपोर्ट अनुसार फेसबुकले पनि यसका सिइओ मार्क जुकरबर्गको सुरक्षाका लागि झण्डै अढाई अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च गरेको छ । जुकरबर्गको सुरक्षाका लागि सन् २०१८ मा भएको खर्च सन् २०१७ को भन्दा दोब्बर हो । रिपोर्ट अनुसार जुकरबर्गलाई सुरक्षित राख्नका लागि फेसबुकले सन् २०१८ मा २ करोड २६ लाख डलर खर्च गरेको छ । जुकरबर्गका लागि गरिएको खर्चलाई फेसबुकले अन्य क्षतिपूर्ति शीर्षकमा खर्च जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा भएको खर्चमध्ये अधिकांस जुकरबर्गकै सुरक्षामा भएको खर्च रहेको छ । त्यस्तै जुकरबर्ग र उनको परिवारको सुरक्षाका लागि थ
भारतमा ‘टिक–टक’ माथि प्रतिबन्ध, गुगल प्लेस्टोबाटै हट्यो, नेपालमा कहिले हट्ला
बैशाख ४, २०७६ । भारतले भिडियो एप्स ‘टिक–टक’माथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मद्रास उच्च न्यायालयको निर्देशानुसार भारतमा उक्त एप्स प्रतिबन्ध लगाइएको हो। मद्रास उच्च न्यायालयको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने ठहर गरेपछि प्रतिबन्ध मंगलबार रातिबाट लागू भएको हो। सर्वोच्च अदालतले मद्रास उच्च न्यायालयमा यस सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सो मुद्दाको फैसला नआएसम्म सर्वोच्चले उक्त विषयसँग सम्बन्धित पुरक मुद्दा नहेर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। भारतमा म‌ंगलबारबाट नै गुगल प्लेस्टोरबाट ‘टिक–टक’ हटाइएको छ। ‘टिक–टक’मा विशेष इफेक्टका साथ प्रयोगकर्ताले भिडियो बनाउन र शेयर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बालबालिकालाई असर परेको भन्दै अदालतले यसमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। ‘पोर्नोग्राफी’ बढाएको, यस्ता भिडियोका ‘कन्टेन्ट’ अश्लील हुने गरेको भन्दै अदा
टिकटक बनाउने क्रममा एकजनाको मृत्यु !
काठमाडौँ । टिकटक बनाउन प्रयोग गरेको बन्दुकले एक व्यक्तिको ज्यान गएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १९ वर्षिय एक युवकले आफ्नो साथीलाई देखाएर टिकटक भिडियो बनाउँदै गर्दा यस्तो घटना घटेको हो । प्रहरीको अनुसार शनिबार राती सलमान आफ्नो साथी सोहेल र आमिर लिएर इन्डिया गेटको यात्रामा निस्किएका थिए । घर फर्कने बेला कार चलाइरहेको बेला सलमानसँगै बेसेका सोहेलले बन्दुक निकालेर टिकटक बनाउने भन्दै सलमानलाई बन्दुक ताके । यद्यपी त्यसबाट निस्केको बन्दुक लागेर सलमान सख्त घाइते बने । घटना भएलगतै अस्पतालमा पुर्याइएको सलमानको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । अचानक यस्तो घटना घटेपटि आमिर, सोहेल र सरिफ फरार भएका तीनै जनाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रक्राउ परेका व्यक्तिहरुमा बन्दुक नियतवश वा दुर्घटनावश चलाइएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भइरहेकोे छ । साथीहरुले घरमै आएर बोलाएपछि घुम्न भनेर
नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्न लागेको भूउपग्रह प्रक्षेपणको भिडियो नासाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने…
Posted in बिज्ञान प्रबिधि, ब्यानर न्यूज
नेपालको पहिलो भूउपग्रह ‘नेपाली स्याट वान’को अन्तरिक्ष प्रक्षेपणको भिडियो अमेरिकाको नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसन (नासा)ले आफ्नो वेब पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ।भूउपग्रह नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान २ः३१ बजे अमेरि का, भर्जिनिया, वल्लोप्स द्वीपस्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण हुनेछ।‘सो समयमा अर्बिटल एटिकेटको सिग्नस इलाभेन मिसनको रकेट प्रक्षेपण हुन्छ,’ भूउपग्रह निर्माता आभास मास्केले जापानबाट अनलाइन कुराकानी गर्दै भने, ‘अन्तरिक्ष यात्रीको कार्गो बोकेर जाने सो रकेटमा भूउपग्रह राखेर पठाउँदैछौं। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आइएसएस)मा करिब डेढ महिना राखेपछि नेपाली स्याटलाई अन्तरिक्षमा छोडिनेछ।’ आइएसएसका लागि कार्गो लिएर जाने एन्टारेस रकेटमा नेपालसँगै श्रीलंकाको ‘रावण वान’ र जापानको युगुइसीमा नानो भूउपग्रह पनि अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण हुनेछन्।१० स
Apr122019 by emechiNo Comments
फेसबुकबाट युवती फसाउन नक्कली एसपीको छोरादेखि परराष्ट्रको अधिकृतसम्म…
काठमाडौँ। अर्पणा पोखरेल (परिवर्तित नाम) जापान बस्छिन्। उनी विगत केही वर्षदेखि जापानमा पढ्दै ‘पार्ट टाइम’ काम गर्दै आएकी छिन्।फ्रेबुअरी १५ मा उनलाई डिआर रमेश भट्ट नामको फेसबुक आइडीबाट रिक्वेस्ट आउँछ। बायो प ढिन्।‘ सक्रेटरी एट एम्बेसी अफ चाइना इन लन्डन, सेक्रेटरी एट सेक्रेटरी– जनरल टु द पे्रसिडेन्ट, रिपल्बिक अफ चाइना एन्ड सेक्रेटरी एट चाइना गभर्मेन्ट स्कोलरसिप, लिभ्स इन बेइजिङ, चाइना।’ बायोबाट अर्पणाले अनुमान लगाउँछिन् मान्छे प्रतिष्ठित नै रहे छ। उनले एसेप्ट बटम दाबिन्। एसेप्ट हुनासाथ डिआर रमेश भट्टले म्यासेज पठाउँछन् ‘हेलो।’अर्पणाले फर्काउछिन् ‘हजुर।’कता हो नानी घर? यस्तै-यस्तै प्रश्न डिआर रमेशले पठाउँछन्। ती युवतीले आफ्नो घर बताउँछिन्। डिआरको प्रश्नको उत्तर युवतीले दिँदै जान्छिन्।उनले अहिले आफू जापान मा भएको बताउँछिन्।डिआर आफू हाल चाइना दूतावासमा कार्यरत रहेको बताउँछन्। डिआरले आफ्नो श्र
Apr112019 by emechiNo Comments
लण्डन – हामीले ‘ब्ल्याक होल’ बारे धेरै सुनेका छौँ तर बुधबार इतिहासमै पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । ब्ल्याक होल पृथ्वीबाट पाँच करोड ५० लाख प्रकाश वर्ष टाढा सुदूर आकाशगङ्गामा देखिएको थियो । यसको आकार सूर्यभन्दा ६५ अर्ब गुना ठूलो छ । ब्ल्याक होलको तस्बिर विश्वका आठवटा टेलिस्कोपको नेटवर्कबाट खिँचिएको थियो । सोबारे एस्ट्रो फिजिक्स जर्नलमा विस्तृत समाचार छापिएको छ । नेदरल्यान्ड्सको रोडबाउन्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हेइनो फेल्किलेसो अनुसन्धानको प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । उनले भने,‘‘हामीले जे देख्यौँ त्यो हाम्रो पूरै सौर्यमण्डलभन्दा ठूलो छ ।’’ के हो ब्ल्याक होल ? ब्ल्याक होल अन्तरिक्षमा भएको यस्तो गुरुत्वार्कषण क्षेत्र हो जहाँ अत्याधिक गुरुत्वबलका कारण प्रकाश पनि बाहिरिन सक्दैन । वैज्ञानिकहरूका अनुसार अन्तरिक्षमा रहेको उच्च
Apr102019 by emechiNo Comments
टेलिकमको नयाँ अफर : भ्वाइस र डाटा सित्तैमा
नेपाल टेलिकमले सस्तो दरको भ्वाइस प्याकका साथै निशुल्क भ्वाइस प्याक योजना सार्वजनिक गरेको छ। जसमा अल टाइम भ्वाइस प्याक, नाइट टाइम भ्वाइस प्याक, डे प्याक नामक बिभिन्न योजना रहेका छन्।योजनामा एक अर्कामा असिमित रुपमा निःशुल्क कल गर्नुका साथै थप डाटा, एसएमएस सुविधा समेत प्रयोग गर्न सियूजी प्याकेजको समेत व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक रात मासिक २० रुपैयाँमा असिमित कल गर्नका लागि सिडीएमए स्काई रिम प्रयोग गर्न सकिने छ। हाल कम्पनीका एफटिटीएच सेवाका ग्राहकलाई समेत निःशुल्क भ्वाइस सेवा कम्पनीले प्रदान गरेको छ। कम्पनीले प्रदान गरेका यी भ्वाइस प्याकहरुमा निम्न योजना रहेका छन्ः अल टाइम भ्वाइस प्याक यस भ्वाइस प्याक अन्तर्गत जीएसएम तथा सिडीएमए प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा एक दिन देखि ६० दिन सम्म प्रयोग गर्न सकिने प्याकेज प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी प्याकेजहरु १० रुपैयाँ देखि